प्रधानमन्त्रीलाई बेलायतबाट गाउँलेको पत्र – News Portal of Global Nepali
14/11/2018 मा प्रकाशित
नगरी नहुने भ्रमणहरू यसभित्र कति होलान् ? प्रायः हरेक देशमा दूतावास छ नै । ती देशसँगको औपचारिक द्विपक्षीय सम्बन्ध त्यसले राखिहाल्छ । लाखौं रुपियाँ भ्रमणभत्ता लिएर ती मन्त्री या कर्मचारी प्रायः नेपाली समुदायका भेला, भोजभतेर या राजनैतिक कार्यक्रममा खादा लगाउन र भुइँफुट्टे भाषण गर्नमैं मस्त देखिन्छन् । बजारमा सजिलै पचास हजारमा पाइने टिकट तिनले दुई लाखमा किनेको देखिन्छ । ती दूतावास ओगटेर बस्छन्, सम्मान र स्वागतका नाममा दूतावासलाई अनावश्यक कार्यक्रम गर्न लगाउँछन् र दूतावासको नियमित काममा असर पुऱ्याउँछन् । गत साल आरजू देउबाले लण्डन दूतावासलाई महिना दिनभन्दा बढ़ी निजी निवासजस्तै दुरुपयोग गरेकी थिइन् । त्यो सानो उदाहरण हो ।
उदाहरणका निम्ति काठमाडौंका मेयरलाई लिनुहोस्, उनी देशमा भन्दा विदेशमा बढ़ी देखिन्छन् । उनी विदेश नगए काठमाडौंले के गुमाउँछ ? उनी जापान गए, कोरिया गए, चीन गए..काठमाडौंले के पायो ? डुलुवा मन्त्री भन्ने उपाधि पाएका उपप्रधानमन्त्रीले छ महिनामा छ वटा विदेश भ्रमण गरेछन् । राजदूतलाई भ्याई नभ्याई हुने गरी झन्डै उनी पन्ध्र दिन त बेलायत नै बसेका थिए । उनले मन्त्रालयमा बसेर कति दिन काम गरे होलान् ?